ပြည်တွင်းခရီးသွားများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို ယခုPage တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
COVID-19 ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အကြံပြုချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်စသည်တို့ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Ministry of Health and Sports တွင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ – ဖတ်ရှုရန်
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်စစ်တမ်းကို မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ Link မှ တဆင့် ဝင်ရောက်၍ ကူညီဖြည့်စွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Survey Form Link: https://forms.gle/kuLosuSPVb1NMCpq5
ရနေပါပြီ။ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Community Based Facility Quarantine ဒေသများမှလွဲပြီး အခြားဒေသတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
Community Based Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရန်သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ link တွင် ဖတ်ရှုပါ
ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ သွားရောက်တဲ့အခါ Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရမှာလား?
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအလိုက် ထုတ်ပြန်ထားရှိသည့် Community Based Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ Link တွင် ဖတ်ရှုပါ
ပြည်တွင်းခရီးသွားများ သိရှိစေရန် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက် Community Based Facility Quarantine (CBFQ) လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ – Download Here
COVID – 19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်သက်မှတ်ထားပါသည်။
ရုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် ရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများ (Ver 1.0)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်း(Hotel/ Guest House) Quarantine Center များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ ( Version 2.0 ) အား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးခြင်း
COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Ver -4.0)
COVID -19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များ
Further Extension of Effective Period of Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar Through Air Travel [Up to 30 November 2020]
COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူသုံး ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်နှင့် အဝေးပြေးကားဂိတ်များတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ ( Version 1.0 ) အား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးခြင်း
စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
စားသောက်ဆိုင်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Ver 1.1)
အခြားသော COVID – 19 သတင်းအချက်အလက်များ
World Health Organization မှ ထုတ်ပြန်ချက်များ
World Health Organization မှ ခရီးသွားအကြံပြုချက်များ
United Nations World Tourism Organization မှ ခရီးသွားအကြံပြုချက်များ
စောစောရှာ Moblie Application အား ရယူရန် – www. sawsawshar.gov.com
STOP COVID-19 Mobile Application- Download here
အီတလီနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများ “Immuni” Mobile Application အသုံးပြုရန်အကြံပြုခြင်း-Read More
COVID – 19 ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုစားမှုအစီအစဉ်
COVID-19 ကြောင့် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှု စစ်တမ်း
Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services
Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services (Beta Version - VI)
Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services (Beta Version - V)
Facebook Page for Domestic Traveler
Facebook Page for International Traveler